कुनैपनि सर्प नपाइने देश, कारण झनै रोचक ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/कुनैपनि सर्प नपाइने देश, कारण झनै रोचक !
काठमाडौं । नेपालसहित विश्वका लगभग सबै देशहरुमा सर्प पाइन्छ । सर्पसँग मानिसहरु एकदम डराउने गर्छन । तर विश्वमा यस्ता केहि ठाउँहरु पनि रहेका छन्, जहाँ सर्प नै पाउँदैन् । आज हामी त्यस्ता केही देशहरुका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
ब्राजिललाई ‘सर्पको देश’ पनि भनिन्छ, किनकि यहाँ धेरै सर्पहरू पाइन्छन् । ब्राजिलमा जति सर्प पाउँछन् तपाईलाई अरू कुनै ठाउँमा भेट्टाउन सहज छैन । तर के तपाईलाई थाहा छ संसारमा यस्तो देश छ जो एक ‘सर्प रहित’ छ ।
अर्थात त्यस्तो देश जहाँ कुनै सर्प नै छैन । हो, आयरल्यान्ड एक त्यस्तो देश हो जहाँ सर्पहरू छैनन् । तर यदि तपाईंलाई यसको पछाडि कारण थाहा छ भने, तब तपाईं थप चकित हुनुहुनेछ ।
आयरल्याण्डमा सर्प नभएको कारण जान्नु अघि हामी यहाँ केहि चाखलाग्दो चीज पनि जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । तपाईलाई यो जानेर अच्चम लाग्नेछ कि ईसापूर्व १२८०० मा आयरल्याण्डमा मानिसजातिको अस्तित्वको प्रमाण छ ।
सब भन्दा पहिले त्यहाँ मानिस भएको बताइन्छ । यस बाहेक, आयरल्याण्डको अर्को विशेष कुरा यो हो कि त्यहाँ एउटा बार छ जुन वर्ष ९०० मा खोलिएको थियो र यो आज पनि चलिरहेको छ । यसको नाम ‘सीन्स बार’ हो ।
तपाईंले ‘टाइटैनिक’ जहाजको बारेमा थाहा पाइसकेको हुनुपर्दछ । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो जहाज थियो, जुन अप्रिल १९१२ मा समुद्रमा डुबेको थियो । जहाज उत्तरी आयरल्याण्डको बेलफास्ट शहरमा निर्माण गरिएको थियो ।
यो आयरल्यान्डको बारेमा भनिएको छ कि यदि आज पृथ्वीमा सबै ध्रुवीय भालुहरू जीवित छन्, यदि उनीहरूले आफ्ना पुर्खाहरूलाई पत्ता लगाउन खोजे, भने तिनीहरू सबै ५० हजार वर्ष अघि आयरल्याण्डमा बस्ने खैरो महिला भालुका सन्तानहरू हुन्।
अब प्रश्नमा आउनुहोस् कि आयरल्यान्डमा सर्पहरू किन फेला पर्दैनन् ? वास्तवमा, यसको पछाडिको कथा छ । आयरल्याण्डमा इसाई धर्मको संरक्षणका लागि यो भनिन्छ कि सेन्ट प्याट्रिक नामका एक जना सन्तले सम्पूर्ण देशको सर्पलाई घेरेर ती टापुबाट बाहिर समुद्रमा फालिदिए । उसले ४० दिन भोकाएर यो काम पूरा गरिसकेको थियो ।
यद्यपि वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि आयरल्यान्डमा कहिल्यै सर्पहरू थिएनन् । फोसिल रेकर्ड विभागमा त्यस्तो कुनै रेकर्ड छैन कि आयरल्याण्डमा सर्पहरू छैनन् ।
आयरल्याण्डमा सर्पहरूको अनुपस्थितिको बारेमा पनि एउटा कथा छ जुन सर्पहरू त्यहाँ फेला परेका थिए, तर चरम चिसोका कारण तिनीहरू लोप भए । त्यस पछि यो मानिएको छ कि चिसोको कारण सर्पहरू यहाँ फेला परेनन् ।
यसबाहेक ६ महिना वा सोभन्दा बढीसम्म हिउँ रहने ठाउँ, चिसो मौसम भएका ठाउँहरुमा सर्पहरूले आफ्नो जीवन धान्न सक्दैनन् । सर्प भूमध्यरेखा वरिपरिका सबै देशहरूमा फेला पर्दछ । तर जब हामी भूमध्यरेखाबाट टाढा सर्न थाल्छौँ ती देशहरूमा सर्पको मात्रा पनि घट्छ ।
यी सबै देशहरूमा सर्पहरू फेला पर्दैनन् । किनभने यी देशहरूमा यो धेरै चिसो छ र प्रायः त्यहाँ चिसो मौसम रहेको हुन्छ । आइसल्याण्ड, स्विडेन, स्विट्जरल्याण्ड र नर्वेमा सर्प फेला पर्दैन किनकि यी देशहरूमा धेरै चिसो हुन्छ । प्रायः त्यहाँ चिसो मौसम रहेको हुन्छ, त्यसैले सर्पहरू त्यहाँ फेला पार्न सम्भव हुँदैन । सर्प जमिन र पानीमा बस्छन् । चीसो जमिन र पानीमा सर्पको कल्पना नै गर्न सकिन्न ।
भागरथी घटनामा कुकुरले देखायो यस्तो प्रमाण, प्रहरी भन्छ,’घटनामा संलग्न अब छिट्टै सार्वजनिक गर्छौ’
सरकारले गरेका कामको परिणाम देखिन थालेको छ : राज्यमन्त्री मानन्धर